လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး ၁-၂၀၂၀
By Thu Aung, on December 31st, 2020
DPNS ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး၃၀ – ၃၁၊ဒီဇင်ဘာ၊၂၀၂၀။ ရန်ကုန်
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက်နေ့တို့တွင် ပါတီဌာနချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ ပါတီတည်ဆောက်ရေးကို ပိုမိုအားစိုက် ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတို့ကို သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့၏ အလုပ်ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြတ်သန်းမှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်၊ ရေးရာကော်မတီများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီများ အစရှိသည့် ကော်မတီအသီးသီး၏ အစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုကော်မတီဝင်များက အစီရင်ခံစာများကို ဝေဖန်သုံးသပ် အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် ၂၀၂၁ အတွင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်တာဝန်များကို ခွဲဝေခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေး နိဂုံးချုပ်နှုတ်ဆက်စကားကို ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နိုးနိုးထက်စံက ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု နိုဝင်ဘာ၊ ၃၀၊ ၂၀၂၀။
By Thu Aung, on November 30th, 2020
အမျိုးသမီးများအားအကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေးအတွက် ၁၆ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု ကမ်ပိန်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ပါတီကော်မတီ ဒုတိယတာဝန်ခံ ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ပါတီဝင်များနှင့် ဒေသခံလူငယ်များ ပူးပေါင်းပါဝင်ထားပါသည်။
ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှုဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀။
By Thu Aung, on December 8th, 0202
” အမျိုးသမီးများအားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် ခွဲခြားမှု ပပျောက်ရေးနေ့” “အမျိုးသမီးတွေကို ဖိနှိပ်တာ၊ အကြမ်းဖက်တာဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာ၊ နေရာတိုင်းမှာ သဏ္ဍာန်ပေါင်းစုံ၊ နည်းသဏ္ဍာန်ပေါင်းစုံနဲ့ ဖြစ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဖကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ အဖကြီးစိုးတဲ့ဝါဒ ကြီးစိုးနေတာ ဒီကနေ့အချိန်ထိ တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး အတူတူ လက်တွဲပြီး တိုက်ဖျက်ရမယ်”
ဦးအောင်မိုးဇော် – ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
အာဏာမသိမ်းဟု မှတ်ယူမရကြောင်း ပြောကြားမှုအပေါ် နိုင်ငံရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများ၏ တုံ့ပြန်ချက်
By chit htoo, on January 28th, 2021
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တကယ်ရှေးရှုမယ်။ တိုင်းပြည် တကယ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက်ကို တကယ်ပဲ စေတနာရှိမယ်ဆို ရင် အဲဒီမှတ်ချက် (တပ်ချုပ်ပြောစကားများ)တွေက အတော်ပြဿနာရှိ တယ်။ အကယ်၍များ တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ်စိတ်စေတနာရှိရင် တိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ သေသေချာချာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့က အဓိကဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီလိုမှတ်ချက် (တပ်ချုပ်ပြောစကားများ)တွေနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင်သင့်ဘူး။ အကယ်၍ တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ်စိတ်စေတနာရှိရင် စစ်တပ်က စစ်တန်းလျားကိုပြန်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
By chit htoo, on January 16th, 2021
ဦးအောင်မိုးဇော် (ဥက္ကဋ္ဌ – လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)
ရန်ကုန်တိုင်း ပါတီကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
By chit htoo, on January 12th, 2021
၁၁၊ ၁၊ ၂၀၂၁။ ရန်ကုန်။
ရန်ကုန်တိုင်းပါတီကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ဇန်န၀ါရီ ၁၁ ရက် နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီတွင် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်နှင်းနှင်းမွှေး (တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁)၊ ဦးငွေလင်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၀င်)နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ယင်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပါတီ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၁) ဒေါ်နှင်းနှင်းမွှေးက ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး၏ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် တာဝန်ပေးအပ်မှုများကို မိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းတာ၀န်ခံ ဦးငွေလင်းက ခိုင်မာအားကောင်းသည့် ရန်ကုန်တိုင်းပါတီကော်မတီ တည်ဆောက်သွားရေးအတွက် စဉ်းစားထားချက်(မူကြမ်း)ကို မိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ ရဲဘော်များက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လတ်တလော ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် တာဝန်ခွဲဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု ဒုတိယနေ့နိုဝင်ဘာ၊ ၂၆၊ ၂၀၂၀။
By chit htoo, on January 11th, 2021
အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေး လှုပ်ရှားမှု (ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု)ကို လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီက ဦးဆောင်၍ (၁၆) ရက် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ဒုတိယနေ့အဖြစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးမြို့နယ်ရှိ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အတူ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး နိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်း(YES) ကျောင်းဆင်းလူငယ်များ၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်၍ ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ဤလှုပ်ရှားမှုကို လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တံတားဦးမြို့နယ် ပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မေဖြူဆွေနှင့် လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ခရက်ဒစ် – ဖဲကြိုးဖြူသီချင်းကို အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ကူးယူထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါသည်။
Call for social welfare policies proves significant in Myanmar elections
By chit htoo, on December 17th, 2020
The latest Myanmar election resulted inalandslide victory to NLD and Aung San Suu Kyi. The two political parties partnering with the Danish Social Democrats also saw encouraging results. This is likely due toamore clearly defined ideology.
The Danish Social Democratic Party (SDP) works with likeminded political parties in Asia, through the Regional Network, “SocDem Asia”. In this network they work with two parties in Myanmar, Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) and Democratic Party foranew Society (DPNS).
In SocDem Asia there isafocus on having discussions about how to translate social democratic policies from the regional level to national contexts. In Myanmar, there have been consultations about how to develop health care policies for the broader public, withaparticular focus on maternal health, in the two partner parties. Moreover, SocDem Asia has held regional conferences on reimagining the Asian welfare state more broadly and how to develop policies in the parties in an inclusive manner.
Based in the policy papers, SNLD had inclusive health care as an important election theme. More generally, they both hadaclearer social democrat ideological profile.
SNLD has traditionally hadabase among the Shan ethnic group, predominantly based in Eastern Myanmar. But in this election, the party has approached the election withamore national, ideology-based economic vision.
Both SNLD and DPNS saw encouraging results in the election. SNLD won 13 seats in the Lower house and2in the Upper House on national level. On state level the party gained 26 seats in Shan State and 1 in Kachin State. In general, the party maintained its position, which was regarded asasuccess, considering the huge win by NLC.
DPNS did not win seats, but asasmaller party it regards the election asasuccess, since it experiences an increase in membership and supporters.
“The divide between pro and anti-military, pro and anti-democracy remains the predominant theme in Myanmar elections, leavingalittle space for important policy debates, such as promoting social welfare policies, which are badly needed alongside long and lasting peace, and democratization. In this context, the campaigns of SNLD and DPNS anchored on needed reforms and social welfare policies are very significant”, says SocDem Asia Program Coordinator, Marlon Cornelio.
By Thu Aung, on December 11th, 2020
DPNS ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေး ၁၁ – ၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေး (၆/၂၀၂၀)ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ပါတီဌာနချုပ်ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်နှင့် နယ်အသီးသီးရှိ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီ၀င်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအ​ဝေး၌ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် နိုင်ငံရေးအ‌ခြေအနေများနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများကို စုစည်းသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများကိုလည်း တာ၀န်ခွဲ‌ဝေ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပထမကျောင်းသားသပိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်း”
By Thu Aung, on December 9th, 2020
ဦးအောင်မိုးဇော်၁၉၈၈ – ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု (လူထုအရေးတော်ပုံ)
ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး (၁၆)ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀။
By Thu Aung, on December 4th, 2020
“မိမိရဲ့ အရည်ချင်းရှိရင် ရှိသလောက် လူတွေကို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်ခွင့်ပြုပြီးတော့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာ ပညာရေးစနစ်သာမက ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှ မရှိသင့်ဘူးလို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်”
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၂၀။
By Thu Aung, on December 3rd, 2020
အမျိုးသမီးများအားအကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေးအတွက် (၁၆)ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုကို လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။”အမျိုးသမီးတွေဟာ ယဥ်ကျေးမှုတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်တွေ၊ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေအောက်မှာ အကန့်အသတ်ခံနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ”
ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင် (ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်)